Apple manambara New iPhone SE - News Fitsipika
Apple manambara New iPhone SE
Revamped iPhone 5S mitondra ny kely indrindra orinasa an-tariby ho amin'ny feh tamin'ny 2015 ny iPhone 6S, raha sakafo karakaraina ho an'ireo izay te ho kely finday
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Apple manambara iPhone SE: kely kokoa, mora kokoa finday avo lenta” nosoratan'i Samuel Gibbs, ho an'ny The Guardian tamin'ny Alatsinainy 21 Martsa 2016 22.43 UTC
Apple no bucked ny lehibe-dia-telefaonina tsara kokoa fironana, ary namoaka revamped dikan-ny 4Izy no iPhone 5S, ny vaovao SE iPhone.
Izany no ho kely indrindra ao amin'ny finday avo lenta lineup Apple amin'izao fotoana izao sy ny finday avo lenta voalohany mba ho afaka amin'ny lamba kely noho 4.7in hatramin'ny iPhone 6 Navoaka tamin'ny Septambra 2014.
Greg Joswiak, VP ny vokatra-barotra ho an'ny Apple, nanao hoe:: "Ny olona sasany tia kely fotsiny finday. Ary ny 4Izy no telefaonina matetika ny iPhone voalohany. Ny olona sasany nanontany ka nitaraina tamintsika. Dia niantso azy io izahay ny iPhone SE. Ny telefaonina 4Izy no mahery vaika indrindra hatramin'izay. "
Ny iPhone SE - mety harking indray amin'ny anarany ny Macintosh SE solosaina, izay navoaka tao 1987 - Manana endrika toy izany koa-lafin-javatra ny 2013 ny iPhone 5S. Tsy manana vatana vy, 4in efijery, Touch ID tondro scanner sy maoderina fakan-tsary family, Tsy tahaka ny farany indrindra Apple iPhones. Ny telefaonina dia ho hita amin'ny mainty, fotsy, volamena sy nitsangana volamena.
Ny any ivelany ny fitaovana mitovy ny iPhone 5S fa ny ao anatiny dia ho toy izany koa amin'ny iPhone 6S, fampiasana ny A9 Apple processeur, ny NFC Chip amin'ny fanohanana an'i Apple Pay sy tsara kokoa 12-megapixel fakan-tsary, mifanaraka amin'ny Apple ny 2015 iPhones.
The iPhone 5S, nanomboka in 2013. Sary: Marcio Jose Sanchez / AP
Ny iPhone SE manana fahefana avo roa heny ny fikarakarana sy efatra heny ny sary fampisehoana ny iPhone 5S, ary koa ny bateria intsony ny fiainana.
Apple dia manantena fa ny kely kokoa dia handresy lahatra ireo finday avo lenta mbola mampiasa ny iPhone 5, 5S na 5C, fa izay tsy te ho lehibe kokoa finday ny haben'ny ny 4.7in iPhone 6S na 5.5in 6S Plus, mba hanatsarana. Cook milaza fa 60% izay mampiasa ny kely kokoa Apple iPhones tsy mbola grady tany amin'ny iPhone 6 na vaovao, midika hoe misy mety tsena lehibe miandry ny-hohainoana.
Lehibe kokoa efijery finday avo lenta no hita fa malaza sy efa namela mpanamboatra mba hanampy bebe kokoa endri-javatra lehibe kokoa tohanan'ny vatoaratra, Apple ny iPhone sy ny 4.7in efijery dia nitoetra iray avy amin'ilay kely indrindra.
Amin'ny maha-kely, Premium finday avo lenta, ny vaovao dia manana iPhone SE kely teny an-dalana ny fifaninanana. Sony ihany no mahatonga ny be mpampiasa finday avo lenta misy flagship kely iray efijery, miaraka amin'ny 4.6in Xperia Z5 Compact. Hafa kely finday atao amin'ny Motorola, HTC sy ny Samsung dia nanapaka-midina, mora dikan amin'ny mahantra singa izay mikendry ny teti-bola-mahalala kokoa fizarana ny tsena.
Na misy mbola mitaky ny kely kokoa Premium-priced finday avo lenta Mbola ho hita. Ny midina fanerena amin'ny vidiny dia nidika mendrika finday avo lenta izao vidin'izany toy ny kely toy ny £ 130, amin'ny endri-javatra mitovy amin'ny farany ambony-niaritra modely inefatra ny vidiny.
Fa Apple, ny iPhone SE misolo tena ny fomba mikendry ny vola-mora kokoa ny tsena tsy niondrika ny teti-bola haavon'ny. Taloha ny orinasa no ampiasaina zokiolona modely ny iPhone, foana ny 2012 iPhone 4S amidy mandra-pahatongan'ny fanafahana ny iPhone 6 amin'ny 2014, ary teo aloha modely talohan'izay. Fa nivarotra finday avo lenta zokiolona fotoana mitovy amin'ny modely vaovao no nanampy ny orinasa foana ny enta-mavesatra ho an'ny finday avo lenta fanavaozana intsony, izay matetika no fara fahakeliny telo taona taorian'ny famotsorana.
The iPhone SE, amin'ny internals mitovy amin'ny ny iPhone 6S fa amin'ny vidiny ambany, mora kokoa ny cater fa ny rindrambaiko vaovao farany satria mampihena ny isan'ny fitaovana Apple variants tsy maintsy hanohana.
Ny iPhone SE ho afaka amin'ny 31 March, amin'ny pre-baiko manomboka 24 March, niaritra avy $399 ao amin'ny US, na £ 359 ao amin'ny UK, fa 16GB ny fitehirizana; $499 ao amin'ny US, na £ 439 ao amin'ny UK, amin'ny 64GB ny fitehirizana.
Apple voampanga ho miezaka mba ho iPhones 'didy fampisamborana-porofo' in FBI raharaha
No, hiala iPhone fampiharana dia tsy hanampy afa-bateria, hoy i Apple
Afaka Manana ny nandevenana azy Space ho Just $ 2K
Ny atidoha ny olona Ny alahelo anie Tsy fantatrareo ny Worl ...
23928	5 Paoma, Article, IOS, iPhone, iPhone 5s, Main section, Finday, News, Samuel Gibbs, Smartphone, Teknolojia, The Guardian, UK vaovao
← Tongasoa eto amin'ny Robot mifototra amin'ny mpiasa Virtual Reality Porn avy →